RASMI: Kooxda Juventus oo xaqiijisay inta uu gaarsiisan yahay qandaraaska uu maanta qalinka ugu duugay Gianluigi Buffon – Gool FM
(Turin) 04 Luulyo 2019. Kooxda kubadda cagta Juventus ayaa bayaan ay soo saatay waxa ay ku xaqiijisay dib u soo laabashada goolhaye Gianluigi Buffon.
Bianconeri waxa ay shaacisay in goolhayaha halyeyga ah ee Gianluigi Buffon uu dib ugu soo laabtay kooxda isla markaana uu qalinka ku duugay qandaraas hal sano ah.
Kooxda Juve Bayaan ay soo saartay laguna daabacay Website-keeda rasmiga ah ayaa u dhignaa: “Kaddib hal sano uu ka maqnaa Turin, Gianluigi Buffon ayaa dib ugu soo laabtay Juventus, kaddib markii uu qalinka ku duugay heshiis hal sano ah kaasoo kooxda ku sii hayn doona illaa 30 bisha June sanadka 2020-ka.”
“Waxay ahayd 19-ka bishii May sanadkii 2018-kii, maalintii uu murugada dareemay qof walba oo naga mid ahna uu tiiraanyo la ilmeeyey markii uu Gigi macsalaameeyey Juventus, laakiin halyeygu waa astaanta kooxda.”
41-sano jirkaan ayaa xilli ciyaareedkii la soo dhaafay ku qaatay kooxda Paris Saint-Germain ee Waddanka Faransiiska, laakiin waxa uu go’aansaday inuu xirfaddiisa ciyaareed ku soo gabagabeeyo Naadiga The Old Lady lagu naanayso.
Buffon ayaa u saftay kooxda Juventus 656 kulan intii u dhaxaysay sanadihii 2001 iyo 2018, waxaana uu kula guuleystay sagaal horyaalka dalka Talyaaniga ee Serie A ah.